राजु अधिकारीको ‘आखिर रोज्ने के ?’ लोकार्पण | Safal Khabar
बुधबार, ०८ बैशाख २०७८, १३ : १२
काठमाडौं । योग विज्ञान तथा जीवनशैली प्रशिक्षक डा.राजु अधिकारीको नयाँ कृति ‘आखिर रोज्ने के ? लोकार्पण गरिएको छ । कोभिड–१९ को बढ्दो दोस्रो लहरका कारण पुस्तक भौतिक रूपमा सार्वजनिक नगरी टेलिभिजनमार्फत लोकार्पण गरिएको हो । उद्यमी एवम् गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक उपेन्द्र महतो र लेखकले मंगलबार संयुक्त रूपमा पुस्तक लोकार्पण गरे ।
टेलिभिजनमा पुस्तक लोकार्पणका अवसरमा जीवन, जगत्, मानिसका इच्छाआकांक्षा, योग, ध्यान अनि यसको प्रभाव आदिका विषयमा साहित्यकार अमर न्यौपानेले लेखक अधिकारी र उद्यमी महतोसँग अन्तर्संवादसमेत गरे । उक्त अवसरमा लेखक अधिकारीले मानिसको जीवनमा सम्भावना र अवसर प्रशस्त हुँदा जीवनको बाटो रोजाइ र निर्णय ठीक भएन भने त्यो अन्यन्तै दुःखद या परिणामहीन हुने बताए । यसले मानिसलाई दुःखद अवस्थामा पु¥याउने उनको भनाइ छ ।
‘आन्तरिक जीवन र बाह्य जीवनबीचको लडाइँ पनि मानिसको सबभन्दा ठूलो लडाइँ हो । त्यसलाई थोरै भए पनि समाधान दिने जमर्को पुस्तकले गरेको छ,’ उनले भने । धन र मनमध्ये कुन रोज्ने भन्ने विषयमा पनि उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मनले चाहेको रोज्दा कहिलेकाहीँ धन पाइन्न,’ उनी भन्छन्, ‘धनको कुरा रोज्दा कहिलेकाहीँ मन पाइन्न । यसलाई कसरी मिलाउने अर्थात् मन र धनलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयलाई पनि पुस्तकमा महत्वका साथ सिकाउन खोजेको लेखक अधिकारीले बताए ।
साधन र साधनाका विषयमा पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । मान्छे साधनकै पछि लागेर जिन्दगी जान्छ, साधना छुट्छ । तर जीवनमा साधनालाई छुटाउनुहुँदैन । उनी थप्छन्, ‘जीवनको भूमरी भनेको अनिर्णय हो, यसबाट मानिसलाई अलिकति भए पनि बाहिर निकाल्ने प्रयास पुस्तकमार्फत गर्न खोजेको छु ।’
मानवजीवनमा निर्णयशक्ति अभिवद्र्धन गर्ने पुस्तक ‘आखिर रोज्ने के रु’ रहेको उद्यमी महतोले बताए । मानिसले मन र दिमागमध्ये मनको आवाज रोज्नुपर्छ । मनको आवाज रोज्यो भने जीवनमा उन्नति प्रगति हुँदै जान्छ । ‘यो पुस्तकले भन्न खोजेको आशय मनलाई रोजौं अर्थात् मनको आवाज रोजौं भन्ने हो,’ उनले भने । आफ्नो जीवनलाई शान्त अनि सुसंस्कृत बनाउन चाहनेलाई यो पुस्तक अति उपयोगी हुन सक्ने उनले बताए । ‘यसले स्वस्थ जीवनको मार्गनिर्देश मात्र गर्दैन, सभ्य समाज निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,’ उद्यमी महतोले भने ।
जीवन र जगत् आफैंभित्र यति सुविस्तृत एवम् गहन हुँदाहुँदै आजका प्रायः मान्छे विष लागेको माछा जस्तो छटपटाएका छन् । अन्तरजीवनप्रति मानिसको दृष्टि अपूर्ण छ । पैसा पैसा, म, मेरो, भोग, सम्भोग यिनै कुरामा रनभुल्ल छन् उनीहरू । उनीहरूलाई यिनै कुराको रस सत्य लाग्छ । र दुर्भाग्य, सत्य रस उसलाई अर्थहीन लाग्छ ।
चौबीसै घण्टा रसरङ्ग र द्रव्यवासनामा निमग्न छ, कलियुगी मानिस । बहिर्मुख, बहिर्मुख अनि बहिर्मुख, जीवनभरि बहिर्मुख । यस्तै छ, दुनियाँको हालचाल ।अन्तर्मुख हुन न कसैले सिकायो,न हामीले जान्यौं । कहाँबाट परोस् त अध्यात्मको चमक र आत्मिकीको झिल्का । अत्याधुनिक मानिसका यिनै समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ‘आखिर रोज्ने के ?
चितवनका पत्रकार पौडेलले ल्याए ‘स्मृतिका तरङ्ग’
महेश बाबुको ‘अजम्मरी अक्षरहरु’ सार्वजनिक
पुस्तक समीक्षाः “सेक्सपियरको आँगन”बाट बेलायत चियाउँदा
गीत : माकुरमाकुर परेवा
नेपाललाई रुसी साहित्य चिनाउने श्रेष्ठको निधन
खोपको समानुपातिक वितरणका लागि फ्रान्सको आग्रह
समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशिला : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार १ बजे बस्दै
शय्या र अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउँदै सङ्क्रमित
एनसेलको नयाँ योजनाः हरेक दिन स्मार्ट फोन जित्ने सकिने
पार्टी एक ढिक्का बनाउने आशमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरात सम्म भिडेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई किन भए निराश ?
ओली र माधवलाई हाइसञ्चो, दोस्रो तहका नेतालाई ज्वरो !
यसरी गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलले बादल र खिमलालबीचको तुलना
प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक ?